တဈစုံတဈယောကျအတှကျ ကြှနျမ ဈေးပေါခဲ့ဖူးတယျ - ONE DAILY MEDIA
ကိုယျ့ကို မလိုအပျတော့ပါဘူးလို့အသံထှကျပွီးပွောတဲ့စကားကို မနာတတျခဲ့ဘူးလေ … ထှကျမသှားပါနဲ့ ဆိုပွီး ဆကျပွီးဆှဲထားနမေိတုနျးပါပဲ … အဆကျအသှယျမလုပျခငျြဘူးဆိုတဲ့ စကားကို သသေခြောခြာ ကွားခဲ့တာတောငျမှ အသံလေးကွားခငျြလို့ပါဆိုပွီး ဖုနျးတှေ ချေါခငျြနတေုနျးပဲ
ကြှနျမ ဘယျလောကျမြားဈေးတှပေေါခဲ့တာလဲ ပွနျတှေးကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ တကယျ့ကို ရှကျစရာပါ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ ရှကျရမယျ့အကွောငျးတှကေိုပဲ ပွနျပွီးပွောပွပါ့မယျ မိနျးကလေးတှထေဲက တဈယောကျယောကျသာ အဲ့လိုကွုံခဲ့မယျဆိုရငျ ကိုယျ့လို မနာကငျြအောငျပေါ့
နောကျထပျခဈြရမယျ့လူတဈယောကျ ရှိနပွေီလို့ပွောတဲ့အခါတောငျ ကိုယျ့မှာ မကျြရညျနဲ့မကျြခှကျ …မဆကျပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ ဖုနျးကို အသံလေးကွားခငျြရုံဆိုပွီး နစေ့ဉျရကျဆကျ ဖုနျးတှေ ချေါနမေိသေးတာ ကိုယျ့အတှကျ မဟုတျတဲ့ Active Now တှမှေနျးသိပါရဲ့နဲ့ စာတှပေို့နမေိတာ
တနျဖိုးတှေ ဘယျလောကျကလြိုကျမလဲလို့ မတှေးခဲ့မိဘူး … အဲ့ဒီအခြိနျမှာ သူ့အနားရှိနဖေို့တဈခုပဲ တှေးခဲ့တာလေ ဘာပဲဖွဈနဖွေဈနေ ဘယျလောကျပဲ နာကငျြရပါစေ သူနဲ့သာဆိုရငျ ကြှနျမ အဆငျပွတေယျလို့ရူးရူးမိုကျမိုကျကို ဆုံးဖွတျခကျြတှခေခြဲ့တာ …
ချေါမလာတဲ့ဖုနျးတှကေိုမြှျောရငျး … ကိုယျမမှားပဲ ဦးအောငျတောငျးပနျရငျးရငျးနဲ့ တဈစုံတဈယောကျအတှကျ ကြှနျမ ဈေးပေါခဲ့ဖူးတာပေါ့ … သူသာမရှိရငျဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို မနှောမွောတော့တဲ့အထိ သိပျကို ဈေးပေါခဲ့ဖူးတယျ ဒီအခြိနျပွနျတှေးကွညျ့မယျဆိုရငျ အရာရာဟာ ရှကျစရာပါ
ကိုယျဆှဲထားရငျ မွဲနတေဲ့လကျတှဟောလဲ သိပျကို အေးစကျလှနျးလှတယျ ကိုယျ တောငျးပနျလို့ပွနျလှညျ့လာတဲ့ခွထေောကျတှမှောလဲ အခဈြတှမှေ မပါပဲလေ …. ဈေးပေါခဲ့ရုံပါ အဆုံးသတျတှကေတော့ အတူတူပါပဲ မကျြရညျတှပေဲ ကရြတယျ …
တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ကျွန်မ ဈေးပေါခဲ့ဖူးတယ်
ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တော့ပါဘူးလို့ အသံထွက်ပြီးပြောတဲ့စကားကို မနာတတ်ခဲ့ဘူးလေ … ထွက်မသွားပါနဲ့ ဆိုပြီး ဆက်ပြီးဆွဲထားနေမိတုန်းပါပဲ … အဆက်အသွယ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကို သေသေချာချာ ကြားခဲ့တာတောင်မှ အသံလေးကြားချင်လို့ပါဆိုပြီး ဖုန်းတွေ ခေါ်ချင်နေတုန်းပဲ
ကျွန်မ ဘယ်လောက်များဈေးတွေပေါခဲ့တာလဲ ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်ကို ရှက်စရာပါ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ရှက်ရမယ့်အကြောင်းတွေကိုပဲ ပြန်ပြီးပြောပြပါ့မယ် မိန်းကလေးတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်သာ အဲ့လိုကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လို မနာကျင်အောင်ပေါ့
နောက်ထပ်ချစ်ရမယ့်လူတစ်ယောက် ရှိနေပြီလို့ ပြောတဲ့အခါတောင် ကိုယ့်မှာ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် …မဆက်ပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ ဖုန်းကို အသံလေးကြားချင်ရုံဆိုပြီး နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဖုန်းတွေ ခေါ်နေမိသေးတာ ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်တဲ့ Active Now တွေမှန်းသိပါရဲ့နဲ့ စာတွေပို့နေမိတာ
တန်ဖိုးတွေ ဘယ်လောက်ကျလိုက်မလဲလို့ မတွေးခဲ့မိဘူး … အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူ့အနားရှိနေဖို့တစ်ခုပဲ တွေးခဲ့တာလေ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင်ရပါစေ သူနဲ့သာဆိုရင် ကျွန်မ အဆင်ပြေတယ်လို့ ရူးရူးမိုက်မိုက်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့တာ …
ခေါ်မလာတဲ့ဖုန်းတွေကိုမျှော်ရင်း … ကိုယ်မမှားပဲ ဦးအောင်တောင်းပန်ရင်းရင်းနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ကျွန်မ ဈေးပေါခဲ့ဖူးတာပေါ့ … သူသာမရှိရင်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနှောမြောတော့တဲ့အထိ သိပ်ကို ဈေးပေါခဲ့ဖူးတယ် ဒီအချိန်ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် အရာရာဟာ ရှက်စရာပါ
ကိုယ်ဆွဲထားရင် မြဲနေတဲ့လက်တွေဟာလဲ သိပ်ကို အေးစက်လွန်းလှတယ် ကိုယ် တောင်းပန်လို့ ပြန်လှည့်လာတဲ့ခြေထောက်တွေမှာလဲ အချစ်တွေမှ မပါပဲလေ …. ဈေးပေါခဲ့ရုံပါ အဆုံးသတ်တွေကတော့ အတူတူပါပဲ မျက်ရည်တွေပဲ ကျရတယ် …